कांग्रेस शीर्ष नेताहरू गुटगत रणनीतिमा व्यस्त | My News Nepal
कांग्रेस शीर्ष नेताहरू गुटगत रणनीतिमा व्यस्त
काठमाडौं । केन्द्रीय समिति बैठकको पूर्वसन्ध्यामा कांग्रेस शीर्ष नेताहरू गुटगत रणनीतिमा व्यस्त भएका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष एकले अर्कोलाई गलाउने र आफू बलियो बन्ने योजनामा तल्लीन देखिएका हुन्।
बैठकले नियमावली मस्यौदा समितिले आफ्नो मस्यौदा पेस गर्ने, त्यसपछि पार्टीका संरचना बनाउन आवश्यक निर्णय लिने, जागरण अभियानको पहिलो चरणको समीक्षा गर्ने, नेविसंघलगायत भ्रातृ संस्थाबारे निर्णय गर्ने र समसामयिक राजनीतिमाथि छलफल गर्ने एजेन्डा देउवा पक्षधर नेताले तय गरेका छन्। यिनै एजेन्डा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउनुपूर्व तय गरिसकिएको थियो।
यस्तै, शनिबार दिउँसो महामन्त्री डा. शशांक कोइराला निवासमा देउवाइतर पक्षका नेताको बैठक बसेको थियो। त्यसमा पौडेल सहभागी भएका थिए। बैठकमा नाफाघाटा आकलन गर्दै केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत हुने रणनीतिमाथि छलफल भएको थियो।
डा. शशांक निवासमा बसेको बैठकमा वरिष्ठ नेता पौडेलसहित महामन्त्री कोइराला, नेता प्रकाशमान सिंह, अर्जुननरसिंह केसी, डा. रामशरण महत, डा. शेखर, सुजाता कोइराला, प्रदीप पौडेल, गगन थापालगायत सहभागी थिए।काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सांसदहरूको आलोचनाप्रति आक्रोशित बनेका थिए । उनले फौजी सिपाहीले जस्तै सरकारको प्रतिरक्षा गर्न सांसदहरूलाई निर्देशन समेत दिए ।
एक सांसदका अनुसार सत्तारूढ दलकै नेता तथा सांसदहरूले सरकारका कामकारबाहीलाई लिएर संसद्, संसदीय समिति र सार्वजनिक मञ्चमा आलोचना गरेकामा प्रधानमन्त्री ओलीले आक्रोश पोखेका थिए ।
बैठकमा उनले दल र पार्टीको बैठकबाहेक अन्य फोरमबाट सरकारको आलोचना नगर्न सांसदहरूलाई सचेतसमेत गराएका छन् ।( अन्नपूर्ण )